Ngeentsuku nje ezimbalwa, ngo-Ephreli 7, unyana onyana kuphela kaJeannene Friske uya kuba neminyaka emithathu ubudala. Ngelishwa, emva kokufa komculi, intsapho yakhe ayinakufumana ulwimi olufanayo nomyeni wengcali uDmitry Shepelev. Ngenxa yoko, u-Plato omncinane ngeli xesha akanalo ithuba lokubona uyise nomakhulukazi. Umntu kuphela ovela kwintsapho yeenkwenkwezi ehamba rhoqo kunye nomntwana nguMama Jeanne.
Kwimidiya, kukho ulwazi oluphikisanayo malunga nento eyenzekayo phakathi kweVladimir Friske kunye noDmitry Shepelev. Ngoko, ngoku kutshanje, umyalezo ubangele ukuba uyise womculi uyaqiniseka ukuba uDmitry akayi kuvumela intsapho ukuba ibone uPlato ngosuku lwakhe lokuzalwa.
Iindaba zakutshanje zaphawulwa nguVladimir Borisovich ngokwakhe. Indoda encokola kunye neendaba zeendaba ze-Starhit iphephandaba yathi loo nkcazelo ifana nokucaphukisa, kuba ngoku inzala yaseJeanne ifuna ukuxoxisana neShepelev malunga nesivumelwano soxolo:
Andizange ndithethe oko. Ngokuqinisekileyo, sasingavumelani, kwaye ngoku unako ukukrazula nayiphi na ibinzana kwiintetho zangexesha elidala kwaye wenze iindaba zalo. Konke oku kufana nokucaphukisa. Kwakhona, ngeli nqanaba, ndifuna ukuza kwisivumelwano soxolo kunye noDmitry. Mna, umkami u-Olga Vladimirovna nentombi uNatasha nje bafuna ukubona uPlato. Akukho ngaphezu koko.
Ndifuna kakhulu ukuba ithemba lokuba amaqela aya kuphuma ebudeni bexesha elide kunye nesithunzi, kwaye uPlato uya kukwazi ukuthetha ngokukhululekile kunye nosapho lwamama.
UVladimir Friske ulungelelanisa ukutshatyalaliswa okutsha kuDmitry Shepelev
Ukuzala umntwana oneminyaka emine ubudala
Ziyintoni i-nitrates kunye nantoni na?
Isaladi yesonka "Iwesifazana"
Abantwana bemozulu beselula
Isaladi kunye ne-mussels kunye nekhukhamba
Lungisa ukutya ngokukhawuleza nangokulula
Oomatshini abaqhelekileyo kwiintsuku ezizayo
I-Aphrodisiac yabasetyhini kwii-pharmacy